Ithegi: iifonti | Martech Zone
Ukuchwetheza kuyamangalisa kum. Iitalente zabaqulunqi bokukhulisa iifonti ezingafaniyo nezinye kwaye ezinokubonisa imvakalelo ayisiyonto imfutshane ngokungakholelekiyo. Kodwa yintoni eyenza ileta? UDiane Kelly Nuguid wabeka i-infographic yokuqala ukubonelela ngengqondo kumacandelo ahlukeneyo eleta kwitypography. Cofa kuyo ukuze ubone umbono opheleleyo. Isigama sokuchwetheza Uluhlu lwamagama Ukuvula - Indawo evulekileyo okanye efakwe ngokuyinxenye eyenziwe ngu
Ixesha elichithwe kwiziphumo zamava omsebenzisi kwiNtengiso ePhakamileyo
Ingxelo yoPhononongo lwamava oMsebenzi we-Econsultancy, eqhutywa ngokudibana ne-WhatUsersDo-uvavanyo lokusebenziseka kwi-intanethi kunye namava ophando kwindawo yamava omsebenzisi-kutyhilwe ubalo. I-74% yamashishini akholelwa ukuba amava omsebenzisi ngumba ophambili ekuphuculeni ukuthengisa, ukuguqula kunye nokunyaniseka. Yintoni amava omsebenzisi? NgokweWikipedia: Amava omsebenzisi (UX) abandakanya iimvakalelo zomntu malunga nokusebenzisa imveliso ethile, inkqubo okanye inkonzo. Amava omsebenzisi aqaqambisa amava, amava anomdla, anentsingiselo kunye nexabisekileyo ekunxibelelaneni komntu nekhompyuter kunye
Izolo, bendithetha eDetroit kwikomkhulu lombutho wamanye amazwe onenkxaso-mali ezininzi. Inkcazo-ntetho yam yayiyiyure ubude kwaye ijolise kwindlela yokujonga ii-analytics ngokwahlukileyo… ndifuna ulwazi ababengazi nokuba lukhona nokuba luyichaphazele njani ishishini labo kwi-Intanethi. Inkcazo-ntetho yayinophengululo lwe-rave kunye neeyure ezimbini emva koko, bendingekashiyi iDetroit. Bendihleli kwaye ndincokola neenkokheli zentengiso ezivela kwezinye
Indawo yokuma komhlaba iyaziphathisa iiarhente. Kwiveki ephelileyo, bendingekho kwiifowuni ezi-5 zokuthengisa apho ithemba sele linomboneleli ngenkonzo, bekhetha umboneleli, okanye sele benayo iarhente. Saqeshwa yinkampani enye ukonyusa umgangatho weinjini yokukhangela. Emva kokujonga indawo yabo phantsi komzuzu, ndibazise ukuba iya kuba ngumzamo omkhulu ngokunikwa i-CMS yabo yakudala. Baqhagamshelana ne-arhente